Taliyaha ciidamada booliiska Puntland oo xilkii ka qaaday taliyihii booliiska qeybta gobolka Nugaal - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyaha ciidamada booliiska Puntland oo xilkii ka qaaday taliyihii booliiska qeybta gobolka Nugaal
November 12, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taliyihii hore ee qeybta booliiska gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir oo loo yaqaan “Qaan-qaan. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidamada booliiska Puntland Cabdiqaadir Shire Faarax ayaa xilkii ka qaaday taliyihii ciidamada booliiska qeybta gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Xaaji Abshir oo loo yaqaan “Qaan-qaan, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday booliiska oo uu arkay warsidaha Puntland Mirror.
Taliye Cabdiqaadir Shire ayaa u magacaabay Cabdirashiid Maxamuud Aw-xuseen oo sidoo kale loo yaqaan “Xinjira-dhuuq” inuu qabto taliyaha booliiska qeybta gobolka Nugaal.
Digreetada dhexdeeda, kuma cadda sababta ka dambaysa xil ka qaadista taliyihii hore ee qeybta gobolka Nugaal.
Taliyaha xilka laga qaday ayaa kasoo shaqeeyay taliska booliska qeybta gobolka Nugaal tan iyo 2009-kii.